Marka aad u baahan tahay si ay u ogolaan in aad iPhone
Waxaa laga yaabaa in xaaladaha ay tirtirto qalab mobile, tusaale ahaan iPhone ah ee qaybtan, waxay noqotaa mid aad u muhiim ah oo aad u tagin khiyaar kale marka laga reebo nadaafadda mobile aad wax alla wixii. A xaalado dhawr caadi arkay waxaa ka mid ah:
Iibinayaan iPhone - Marka aad u isticmaashay aad iPhone in muddo ah oo aad doonayso inaad ugu bedesho kala duwan, telefoonka ah la casriyeeyay, waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad ka iibin telefoonka aad hadda oo ay isticmaalaan lacag caddaan ah si aad u hesho mid cusub. Si kastaba ha ahaatee, ka hor inta dhiibteen ka telefoonka, waxaa laga yaabaa inaad rabto in aad ka tirtiri dhammaan macluumaadka shakhsiyeed ka qalab aad si ay u ilaaliyaan gaarka ah iyo in la hubiyo in macluumaadkaaga aan si qaldan.
Tuurida Your iPhone Off - Xaaladdan waxaa inta badan soo wajahay marka aad isticmaalayso si aad iPhone ay u isticmaalaan shirkadaha meesha ammaanka waa walaac weyn. Tan iyo markii ay telefoonada gacanta loo isticmaalo deeganada shirkadaha laga yaabaa in dhowr sirta ah iyo macluumaad xasaasi ah oo kale oo iyaga ku badbaadin doonaa in, nadiifinta kasta oo sida iPhone ka hor inta tuurida off uu noqonayaa mid aad u muhiim ah si ay u ilaaliyaan ammaanka.
Xukumaya Your iPhone in Kids / Xubnaha Qoyska - Tani waa xaalad kale oo laga yaabaa in aad rabto in aad nadiifiso aad iPhone ka hor caruurta ama xubnaha kale ee qoyska aad bilaabeyso isticmaalkeeda. Inkasta oo uu jiro walaac ammaanka lahayn, haddana waa muhiim in la siiyo telefoon cusub oo nadiif ah qoyskaaga si ay u astaysto qalabka sida ay rabaan ama ay.
Soo celinta Settings Default - Haddii aad iPhone ayaa ku soo bilowday dhaqmayaan obnoxiously tan iyo markii dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay, waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad u soo celiyaan goobaha ay default iyo tirtiro dhammaan macluumaadka aad ka si aad bilaabi kartaa in ka badan xaq ka xoq ah.
Hoos u dhac Performance - Marar badan files junk in aad iPhone ayaa ururiyey in ka badan markii laga yaabaa inay daalid, iyo sababta oo ah waxa aad la kulmi kartaa qaab hoos u aad telefoon. Masaxaadda dhammaan xogta ka qalab hagaajinaysaa ay qaab ciyaareed la yaabka lahaa.
Sida loo ogolaan in aad iPhone Data joogto ah
Inkasta oo tirtira xogta aad ka iPhone waa u fududahay isticmaalaya ay dhisay-in feature, macluumaadka tirtiray weli la soo kabsaday karaa iyadoo la isticmaalayo qalab kasta oo hufan kabashada file, sidaas samaynaya aad macluumaad xasaasi ah u nugul gaadhista dda / dadka aan la ogalayn. Sidaa darteed, si ay si joogto ah masixi xogta aad iyo si ay u irrecoverable, waxaa muhiim ah in la isticmaalo qalab casri ah in uu yahay awood weligiis isagoo tirtira xogta aad.
Wondershare Uu qabtay shaqo weyn halkan ka muuqata lagu abuuro qalab ka saarida xogta wax ku ool ah mobile magacaabay SafeEraser. Iyadoo SafeEraser Wondershare , aad u tirtiri karaa oo keliya ma aad iPhone nadiif ah laakiin kaloo samayn kartaa kale hawlo badan ayna telefoonka iyo maamulka kaydinta.
Wondershare SafeEraser lagala soo bixi karaa sida madal of your computer (Windows ama Mac) ka xiriirka hoose la siiyey halkii:
Waxaad tirtiri kartaa iPhone nadiif ah oo isticmaalaya Wondershare SafeEraser adigoo raacaya taallaabooyinka hoos ku qoran:
1. Download Wondershare SafeEraser sida madal your computer ee ka links kor ku xusan.
2. Ku rakib barnaamijka aad kombuutarka la isticmaalayo habka caadiga ah.
3. Ka dib markii SafeEraser la geliyo, abuurtaan barnaamijka by double-gujinaya ay toobiye icon.
4. interface ugu horeysay, markii baxdo, ku xiran aad iPhone in PC isticmaalaya ay cable xogta asalka ah.
5. Sug inta wadayaasha ah looga baahan yahay iPhone ku xiran waxa loo xiraa.
Fiiro gaar ah: Waxaa laga yaabaa inaad u baahan tahay in aad bixiso ogolaashahaaga oo xaqiijin rakibo barnaamijyo taageeray kaas oo sidoo kale ka mid ah Lugood.
6. Ka dib darawalada waxay ku rakiban yihiin, ka interface bilowga ah, riix icon masixi All Data (icon hore telefoonka gacanta iyo calaamadda khada).
7. Ka suuqa kala socda, riix Dhexdhexaad joogo link soo socda si ay Level Security calaamadda.
8. Laga soo Settings uu furmo suuqa, ka Murayaad saxda ah, oo ka soo hoos Select Heerka qaybta, guji in ay doortaan button raadiyaha la tilmaamayo inta jeer Wondershare SafeEraser overwrites xogta random ka dib markii isagoo tirtira kaydinta. (Tirada sare, ka yar yihiin isbedelka soo kabashada xogta ka dib markii ardayga.)
9. Click OK . marka loo sameeyo Fiiro gaar ah: Tallaabooyinka 7, 8 iyo 9 waa ikhtiyaar.
10. Dib on furmo suuqa hore, in sanduuqa laga heli karaa qoraalka, nooca tirtirto si loo xaqiijiyo in hawsha la soo bilaabay Dad ayan script kasta oo laga shakiyo ama barnaamijka.
11. Ugu dambeyntii guji masixi Hadda ka hooseysa in ay si joogto ah masixi xogta aad ka iPhone iyo tirtiri telefoonka nadiif ah.
Waxa intaa dheer in tirtiro xogta aad ammaan ka iPhone, qaar ka mid ah muuqaalada kale ee muhiimka ah in Wondershare SafeEraser uu leeyahay waxaa ka mid ah:
Space Saver - Si aad u cadaadin sawiro ku kaydsan ee iPhone si ay kaaga caawiyaan in aad isticmaasho xasuusta telefoonka ee loogama.
Masixi tirtiray Files - Si aad u masixi files hore u tirtiray sidan oo kale ay u noqdaan irrecoverable wax alla wixii xataa haddii qalab waxtar leh soo kabashada file waxaa loo isticmaalaa ah.
Masixi Data Private - Si aad si ammaan ah u saari macluumaad xasaasi ah ka iPhone iyo si ay u irrecoverable.
1-Guji Nadiifinta - Si aad u nadiifiso files junk iyo macluumaadka kale ee jirka oo aan la isticmaalin ka iPhone.
Tirtiro wixii xog ah ka aad telefoon si ay u tirtiri daahir waa muhiim, laakiin ka muhiimsan waa sida aad u nadiif ah oo aad u irrecoverable si xogtaada aan si khaldan loo isticmaali karaa qof kasta. Isticmaalka ah qalab tirtire xogta ku ool ah sida SafeEraser Wondershare hubisaa in macluumaadka gaarka ah laga saaro telefoonka si joogto ah oo aan la soo celin karaa iyadoo la isticmaalayo qalab kasta oo kale ee soo kabashada file.
> Resource > iPhone > Sida loo ogolaan in aad iPhone Nadiif ah